Iinqwelomoya ezitsha phakathi kweNewark Liberty kunye neReagan National eUnited ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya ezitsha phakathi kweNewark Liberty kunye neReagan National eUnited ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Inkonzo entsha yothutho ye-United phakathi kweNew York/Newark Liberty International Airport kunye neReagan National Airport iya kusebenza iintsuku ezisixhenxe ngeveki, kunye neenqwelomoya ezili-18 ezinikezela ngenkonzo phantse ngeyure phakathi kwe-6AM kunye ne-10PM.
I-United ibhengeza ishedyuli entsha yokuhamba phakathi kweNewark Liberty kunye nezikhululo zeenqwelomoya zeReagan ziqala nge-31 ka-Okthobha nge-CRJ-550 yeklasi ezimbini.
I-United ngoku yenza uhambo lwe-32 ngosuku phakathi kwe-NYC-indawo kunye ne-DC, ukunyuka kwe-78% kunye neenqwelomoya ezininzi kuyo nayiphi na inqwelomoya.
Zonke iinqwelomoya ze-United ukusuka kwi-NYC ngoku ziya kusetyenziswa ziinqwelomoya zodidi olubini, kuquka ne-737 MAX-8 entsha kunye ne-CRJ-550 jet.
I-United Airlines yenza uhambo phakathi kweSixeko saseNew York kunye neWashington DC lube lula kwaye lube lula ngakumbi, ibhengeza namhlanje ukuba iza kumisela inkonzo entsha yeshuthi yeyure phakathi. Isikhululo seenqwelomoya saseNew York/eNewark Liberty kunye nesikhululo seenqwelomoya iReagan National Airport ngoOct. Zizonke, United Airlines iya kusebenza malunga neenqwelomoya ze-32 ngosuku ngalunye phakathi kwe-NYC kunye neendawo ze-DC, ukunyuka kwe-78% kunye neenqwelomoya ezininzi kuyo nayiphi na enye inqwelomoya.
United Airlines inika bonke abathengi bayo kwisiXeko saseNew York uphuculo: ukuqala nge-31 ka-Okthobha, konke ukuhamba kwenqwelomoya ukusuka. Isikhululo seenqwelomoya saseNew York/eNewark Liberty, I-Airport ye-John F. Kennedy yamazwe ngamazwe kunye ne-Airport yeLaGuardia iya kubandakanya inketho yeklasi yokuqala, kuquka i-737 MAX-8 kunye ne-CRJ-550 - ijethi yengingqi yokuqala ye-50 yengingqi enezihlalo zokuqala kunye nezixhobo. I-United ngoku iza kubonelela ngezihlalo zeprimiyamu ezingaphezu kwe-7,000 kubathengi kwisiXeko saseNew York, ngaphezu kwayo nayiphi na enye inqwelomoya, kwaye uninzi kwimbali yenqwelomoya.
“Ngokubhabha indawo enkulu, iinqwelomoya zale mihla ziphuma kwindawo yeSixeko saseNew York, asinikeli nje abathengi bethu ukuba babe bhetyebhetye kwaye bakhethe kodwa sikwanikezela ngamava athembekileyo, akumgangatho ophezulu,” utshilo u-Ankit Gupta, uSekela Mongameli oPhezulu kwezeKhaya. UCwangciso kunye ne-United Express.
"Abathengi bethu abahamba rhoqo phakathi kweWashington, DC, kunye neNew York basixelele ukuba baxabisa lula kunye nentuthuzelo ngaphezu kwayo yonke enye into, kwaye i-United izibophelele ekuboneleleni ngenqanaba eliphezulu lenkonzo abayicelayo."
I-United's CRJ-550 yinqwelomoya yokuqala yehlabathi enezihlalo ezingama-50 eyenzelwe ukunika izihlalo zodidi lokuqala kunye nezinto eziluncedo. Yayiyilelwe ekuqaleni ukuhlalisa abakhweli abangama-70 kunye, ulungelelwaniso lwe-CRJ-550 ye-United yandisa intuthuzelo yabathengi.
Inkonzo entsha yothungelwano ye-United phakathi Isikhululo seenqwelomoya saseNew York/eNewark Liberty kunye neSikhululo seenqwelomoya seSizwe saseReagan siya kusebenza iintsuku ezisixhenxe ngeveki, kunye neenqwelomoya ze-18 ezinikezela malunga nenkonzo yeyure phakathi kwe-6AM kunye ne-10PM, amaxesha amaninzi kunayo nayiphi na enye inqwelomoya. United Airlines iya kuqhuba kwakhona iinqwelomoya ezintlanu mihla le phakathi kweNew York/Newark Liberty International Airport kunye neWashington Dulles Airport. Iinqwelomoya ezintsha phakathi kwesikhululo seenqwelomoya saseLaGuardia kunye neWashington Dulles Airport ziya kuzisa ukubalwa kwendiza yemihla ngemihla ukuya kwisithoba kwaye kubonelele ngenkonzo ehambelanayo iintsuku ezisixhenxe ngeveki phakathi kwe-6AM kunye ne-10PM.